इक्वेडर को सर्वश्रेष्ठ: Pailón del Diablo | यात्रा समाचार
इक्वेडर को सर्वश्रेष्ठ: Pailón डेल डियाब्लो
एनरिक गिलि | | सुझावहरू, इक्वेडर, सामान्य, के हेर्ने, क्युटो
El पाइलन डेल डियाब्लो (आधिकारिक रूपमा कास्काडा डेल रियो वर्डे) बाओस दे अगुआ सान्ता सहर नजिकै इक्वेडरियन एन्डिसमा अवस्थित पास्ताजा नदीको झरना हो। इक्वेडरियाको ज b्गलको सीमा।
यो एक मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण हो तुंगुरहुआ क्षेत्र (र निश्चित रूपमा सबै दक्षिण अमेरिकाबाट) यसको शानदार प्रकृति दिइएको छ, यसको राष्ट्रिय राजमार्गको निकटता र यसको 80० मिटर भन्दा अग्लो छ।
शैतानको अनुहारमा चट्टानको समानता छ जसको एक पूलबाट देखिएको छ।
यदि केहि हप्ता अघि मैले तपाईंलाई इक्वेडरमा आवश्यक भ्रमणको बारेमा बताएँ (Cotopaxi राष्ट्रीय पार्क र ज्वालामुखी), Pailón del Diablo अर्को हुनेछ। एन्डियन देश हुँदै प्रत्येक ब्याकप्याकिंग मार्ग (वा छैन) बाओस डे अगुआ सान्ता र यसको वरपरका शहरहरू (झरनाहरू, ज्वालामुखीहरू, ज and्गल र अद्वितीय परिदृश्य) को माध्यमबाट जानु पर्छ।
1 कसरी प्यालेन डेल डियाब्लो झरनामा पुग्ने?
2 प्यालेन डेल डियाब्लो झरनामा के हेर्ने?
कसरी प्यालेन डेल डियाब्लो झरनामा पुग्ने?
झरना को प्रवेश द्वार अवस्थित छ बाओस डे अगुआ सान्तालाई पुयो शहरको साथ जोड्ने सडकको एकदम नजीकपहिले नै अमेजन ज jun्गलको बीचमा, र पहिलो शहरबाट करिब २० किलोमिटर।
यस निकटतालाई देखतेका लागि, यो पहुँच गर्न धेरै सजीलो छ, इक्वेडरमा अन्य आकर्षणहरू जस्तो, पाइलन डेल डियाब्लो मात्र सडकमा पहुँच गर्न सकिन्छ, त्यहाँ कुनै रेलहरू छैनन्।
प्राप्त गर्न बाओस डे अगुआ सान्ता वा पुयो, सबैभन्दा उपयुक्त चीज भनेको यसलाई इक्वेडरियाको सार्वजनिक यातायात सेवाको बसमा गर्नु हो। बसहरू हरेक घण्टा अम्बाटो र लाटाकुंगा जडान गर्दछ (एन्डिसमा) दुबै उष्णकटिबंधीय शहरहरूको साथ।
बाओसमा एक पटक, तपाईं घेराको प्रवेश द्वारमा पुग्न सक्नुहुनेछ:
सार्वजनिक बस द्वारा: या त बाओस बाट वा प्युयो बाट। केही बसहरू सिधै झरनाको माथिल्लो प्रवेशद्वारमा रोकिन्छन् (त्यहाँ २ प्रवेश द्वारहरू छन्)। अन्यहरू सडकको बिचमा रोक्छन् तर तल्लो प्रवेशद्वारको नजिक। तिनीहरूले दुबै बाहिरी र फर्किने मार्ग बनाउँदछन् र स्वीकार्य आवृत्ति हुन्छ, हरेक घण्टा त्यहाँ धेरै बसहरू छन्।
ट्याक्सीबाट: यो पक्कै छिटो विकल्प हो तर सबैभन्दा महँगो। लगभग १ minutes मिनेटमा तपाईं बाओसको बीचबाट पाइलन डेल डियाब्लो आउनुहुन्छ। यदि हामीले यो विकल्प छनौट गर्यौं भने, यो यात्राको मूल्य राम्रोसँग कुराकानी गर्न र पक्कै अर्को ट्याक्सी वा बसको साथ फिर्ती यात्रा गर्न सल्लाह दिइन्छ।
साइक्लि। यस विकल्पले पर्यटकहरूलाई प्रदान गर्ने आकर्षण मध्ये एक हो: पुइयो सम्म सम्पूर्ण सडक बाइक द्वारा यात्रा गर्नुहोस् र बाटोको प्रत्येक झरनामा रोक्नुहोस्। यस अर्थमा म तपाईंलाई धेरै कुरा भन्न चाहन्छु। एकातिर, सडक राम्रोसँग प्रशस्त भएता पनि धेरै यातायात छ र त्यहाँ धेरै सुरु tunहरू छन्। अर्को तर्फ, बाओस देखि पुयो सम्म ढलान तलको तर्फ लगातार छ, तर पछाडि बाटो उकालो छ। अन्तमा, ध्यान दिनुहोस् कि दुई शहर बीचको दूरी करीव or० वा km० किलोमिटर हो। यदि तपाईं बाइकको मार्गमा झरना हेर्न चाहनुहुन्छ भने, यो दिमागमा राख्नुहोस्। निस्सन्देह सबै भन्दा उपयुक्त हुन सक्छ साइकलबाट तल आउने र बस वा ट्याक्सी-30 in in मा साइकलमा स्वीकृति गर्ने मार्ग।
मेरो अनुभवबाट, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं बाओसमा आवास खोज्नुहोस् र एन्डियन जंगलले कम्तिमा २ दिनको लागि यस शहरबाट प्रस्ताव गर्ने सबै मार्गहरू र विकल्पहरूको मजा लिनुहोस्। १ एक दिन पर्याप्त छैन, यो झरनाका लागि पूरा दिन आवश्यक छ यदि यो दुबै पक्षबाट गरियो भने।
प्यालेन डेल डियाब्लो झरनामा के हेर्ने?
म पहिले टिप्पणी गरीएको छु घेरा झरनाको तल्लोबाट वा माथिबाट पहुँच गर्न सकिन्छ। यद्यपि प्रवेश पूर्ण रूपमा निःशुल्क छैन (केही हदसम्म यो छ, उदाहरणका लागि पहिलो सस्पेंशन ब्रिज, त्यहाँबाट छैन), म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु तपाईंले दुईवटा मार्गहरू गर्नुहोस्। एउटा अर्कोसँग जडान हुँदैन, एक बिन्दुमा त्यहाँ बाधा छ जुन तिनीहरूलाई अलग गर्दछ। छनौटको आधारमा, म पहिले तल्लो मार्गमा र त्यसपछि माथिल्लो त गर्ने छु, मलाई लाग्छ कि यो अलि बढी प्रभावशाली छ।
यदि हामी गर्छौं भने तलबाट यात्रा हामी पहिलो पटक यसको सबै भव्य (चरा, रूखहरू, भिजे मैदानहरू, ...) मा अमेजन वर्षावनको रमाइलो लिनेछौं र अन्तमा तलबाट दर्शाउने पाइलन डेल डियाब्लो। यो लगभग आधा घण्टाको एक मार्ग हो जब सम्म तपाईं केवल तल र झरना पछाडि सम्म पुग्नुहुन्न। त्यहाँ धेरै दृश्यहरू, पुल र सीढीहरू छन् जहाँबाट झरना मनन गर्न।
यदि हामीले माथिबाट यात्रा ग ,्यौं भने, हामी पहिले पास्ताजा नदी पछिको छोटो मार्गको आनन्द लिनेछौं, सानो झरनाहरू सहित।, र पनि क्षेत्र को आर्द्र जंगल वनस्पति को। केही मिनेट पछि हामी स्थित हुनेछौं झरनाको माथिल्लो अन्त जहाँबाट हामी मनमोहक झरना (लगभग १०० मिटर असमानता) लाई चिन्तन गर्न सक्छौं। त्यहाँबाट पहाडका विभिन्न बिन्दुहरू जोड्ने र क्रमशः पाइलनको तल्लो भागमा झर्ने थुप्रै काठका काठहरू पुलहरू बनाइएको छ। लगभग कुनै पनि पुलहरू र बाटोमा सीढी दृश्यहरू रमाईलो लिन वा तस्विर लिनको लागि उत्तम हो। यो देख्नको लागि वास्तवमा एक ब really्गि छोड्छ। निश्चित बिन्दुहरूमा यसले भर्टिगोको एक बिट दिन्छ।
झरना वरपरका क्षेत्रमा तपाईं विभिन्न प्रकारका चरम खेलहरू अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि राफ्टि,, पर्वतारोहण वा जिप लाइन। एड्रेनालाईन प्रेमीहरूको लागि, Pailón del Diablo आदर्श स्थान हो।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, इक्वेडरको यो क्षेत्र (र निश्चय पनि हामीले यसलाई बाँकी देशसम्म विस्तार गर्न सक्दछौं) युरोपेली जनतालाई राम्ररी थाँहा छैन र निस्सन्देह यो दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा सुन्दर र दर्शनीय कुना हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » सुझावहरू » इक्वेडर को सर्वश्रेष्ठ: Pailón डेल डियाब्लो
साहित्य प्रेमीहरूको लागि पर्यटक मार्गहरू
स्पेनमा २० विश्व सम्पदा स्मारकहरू (II)